अभावले जन्माएको मीठो अतीत | Nagarik News - Nepal Republic Media
अभावले जन्माएको मीठो अतीत
केराको पातमा पका’को मकैरोटी, खाइन्थ्यो निख्लो आँटो मोहीसित
अहिले फलफूलसँगै विषादी खाइन्छ, छ अर्गानिक खानेकुरा कोहीसित?
ए अहिलेका नानी हो ! हामीसँग जहिले ज्ञान विज्ञानको फूर्ति लाउँछौ
आगोमाथि माटोको हाँडीमा भुटेको मकैको स्वाद के चाउचाउमा पाउछौ ?
दिनभरि ब्याट्री घाममा सुकाई बेलुका ‘चौतारी’ सुनिन्थ्यो
मुखियाबाको सत्यनारायणको पूजामा मायाजाल बुनिन्थ्यो
ए अहिलेका नानी हो ! हामीसँग जहिले सूचना प्रविधिको धाक लाउँछौ
हाम्रो पालाको जस्तो चोखो माया र प्रेम के फेसबुक र युटयुवमा पाउछौ ?
दुई जना तर मिठाई एउटै, कमिजको फेरको पोको दाँतले टोकेर
दुई टुक्रा एकएक बाँडिन्थ्यो चीज हरेक, साथीको माया लौ हेर
ए अहिलेका नानी हो ! हामीसँग जहिले ‘बेस्टफ्रेण्ड’ छ भनी गफ लाउँछौ
पहिलेको जस्तो आत्मिय साथी, गोजी तौलेर खोजिहिँड्दा तिमीले कहाँ पाउँछौ ?
खुट्टाको सुम्लो हटे नि दिमागको हट्या छैन बाबाले पाइपले कुटेको
याद छ अझै त्यो पाइपे पांग्रोमा बाटोमै भुल्दा पिरियड छुटेको
ए अहिलेका भुराभुरी हो ! हामीसँग विएमडब्लु, मर्सिडिजको सान देखाउँछौ ?
पहिलेजस्तो पाइपको पांग्रा चलाउँदा पाउने स्वर्गीय आनन्द अहिले पाउँछौ ?
लालुपाते फूलको चोब निकाली छोक्राको चुइगम बना’र खाइन्थ्यो
खोली खेतको दाइको खानामा अलग्गै वनभोजको स्वाद पाइन्थ्यो
ए अहिलेका नानी हो ! हामीसँग ‘मोर्डन फुड टेक्नोलोजी’को धक्कु लाउँछौ
पहिलेको जस्तो खाने, पिउने र जिउने कला अहिले खोजेर तिमीले कहाँ पाउछौ ?
अभावले जन्मियो मीठो अतीत, पैसाले किन्छु भने नि पाइएन
दुःख–हण्डर खाइयो, मजाले पचाइयो तर हरेशचाहिँ खाइएन
ए अहिलेका नानी हो ! हामीसँग जहिले ‘सुविधा’को घमण्ड देखाउँछौ
पुर्खाको इतिहास, संस्कार र संस्कृति बिर्सेर आखिर तिमीले के पाउछौ ?
प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७७ १२:०८ बुधबार